बिज्ञान-प्रबिधि – PostKathmandu
यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल : मूल्य सुनेर पत्यार नलाग्न सक्छ ! विश्वकै सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकलको मूल्य कति हुन सक्ला ? १० लाख, २० लाख या ५० लाख ? होइन तपाईंलाई पत्यार नै नलाग्न सक्छ । यसको मूल्य करिब ९ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्दछ । यो मोटरसाइकल हार्ले डेविडसनको हो जुन विश्वकै सबैभन्दा महँगो हो । उनले यो बाइकलाई सुनको परतबाट बनाएका हुन् । साधारण मानिसलाई यो महँगो लागे पछि कम्पनीको दावी छ कि धनी शौखिनहरुका लागि यो मूल्य धेरै होइन । यो बाइक डेनमार्कको लज जेनसेन कम्पनीले बनाएको हो । केही समय पहिले यो बाइक जर्मनीको हैम्बर्गमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यो पनि पद्नुहोस महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा
Mar52018 by PostKathmanduNo Comments
तपाइँको फेसबुक अकाउन्ट अरुले त खोलिरहेको छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस् साइबर अपराधीहरुलेे इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका विभिन्न अकाउन्टहरु ह्याक गर्ने र प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको दुरुपयोग गर्ने घटना नौलो होइन । पछिल्ला वर्षहरुमा अनलाइनमार्फत प्रयोगकर्ताको पहिचान चोरी गर्ने घटना तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । प्रचलनमा रहेका सोसल मिडिया साइटहरुमध्ये फेसबुक धेरै प्रयोगकर्ताको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अकाउन्टको रुपमा रहेको हुन्छ । फेसबुकमा गरिने कुराकानी तथा शेयर गरिने जानकारीहरुको दृष्टिले गर्दा फेसबुकमा हरेक प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नो गोपनियता निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । फेसबुक आफैले प्रयोगकर्ताको अकाउन्टको सुरक्षाका लागि विभिन्न टुल्सहरु उपलब्ध गराएको हुन्छ । आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा कुनै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा वा ह्याकिंगको आशंका भएमा पहिचान गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरु उपलब्ध रहेका छन् । य
Feb142018 by PostKathmanduNo Comments
मन्जन बाट बनाउनुहोस पुटेको मोबाईलको स्क्रीनलाई पहिलेको जस्तै – हेर्नुस भिडियो मन्जन भन्ने बित्तैकै हामी यो बुज्छौ कि यो दात माझ्नको लागी प्रयोग हुने कुरा हो ।यदी तपाईं यस्तो सोच्नु हुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । मन्जनलाई धेरै कुराहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।जस्तै दात माझ्ने कुरा त छदै छ तर यस्ले तपाईंको मोबाईलको स्क्रीन फुटेको छ भनेपनि जस्ताको तस्तै बनाइदिने काम गर्छ । यो कुरा सुनेर तपाईं अचम्ममा पर्नु भयो होला । तर यो सत्य हो मन्जनले मोबाईलको स्क्रीन फुटेको जस्तैको तस्तै बनाइदिने काम गर्दछ ।बिश्वास नलागे हेर्नुस तलको भिडियो र हामीलाई प्रतिकृया दिनुहोस ।मन्जन बाट बनाउनुहोस पुटेको मोबाईलको स्क्रीनलाई पहिलेको जस्तै – हेर्नुस भिडियो
Jan162018 by PostKathmanduNo Comments
एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका हो । हजारौं नम्बर यसरी एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा सार्न कम्ता मुस्किल पर्दैन । तर, एउटा मोबाइलमा राखिएका नम्बर तुरुन्तै अर्कोमा पठाउन सकिने सजिला तरिका पनि छन् । सिकिराख्नुहोस्, उपयोगी हुन्छ : गुगल कन्ट्याक्टबाट तपाईं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सबै फोन नम्बर गुगल कन्ट्याक्ट्स सेभ हुन्छ । यसलाई तपाईंको जिमेल आइडीसँग सिन्क गरिदिनुहोस् । अब, नयाँ फोनमा जिमेल आइडी ओपन गरेपछि सबै फोन नम्बर उपलब्ध हुन्छ । तपाईंलाई जिमेल लगइन गर्न जति समय लाग्छ, उति समयमा सबै फोन नम्बर आउँछ । ब्लूटुथको माध्यमबाट मोबाइलमा रहेका फोन नम्बर ब्लूटुथ
संघर्स के हो? यी केहि फोटोहरु हेर्नुहोस, तपाइको मन छुने छ Minister for Irrigation, Sanjaya Kumar Gautam, has stated that the government was preparing to hold provincial and federal election on the same day by January 21, 2018. At an interaction programme held in the Capital on Saturday, Minister Gautam clarified that the limited time left for holding the two-tires of elections has prompted the government to conduct them on the same day. Arguing that both the time and money would be saved by holding both elections on the same day, Gautam underscored government’s coordination with the major opposition for the same. “The Prime Minister has already held discussion with the Election Commission in connection to the same. The Commission is also positive about it. The election date wou
एउटा आलुले ४० दिनसम्म बत्ति बाल्न सकिने ! एजेन्सी।के घरमा बत्ति बाल्न विद्युत ग्रीडको सट्टा आलुको प्रयोग सम्भव छ? अनुसन्धानकर्ता राबिनोविच र उनका सहयोगी अघिल्ला केही वर्षदेखि यसैलाई प्रोत्साहित गर्दै छन। सस्तो धातुको पाता, तार र एलइडी बल्ब जोडेर यस्तो बत्ति बालिन्छ र विश्वका स-सना गाउँ यहि प्रविधिले उज्यालो बनाउने सक्ने उनी दाबी गर्छन्। बीबीसीमा छापिएको एक रिपोर्ट जेरुशेलमको हिब्रु युनिभर्सिटीका राबिनोविच दाबी गर्छन्, ‘एउटा आलुले एलईडी बल्ब ४० दिनसम्म बाल्न सक्छ।’ राबिनोविच यसको लागि कुनै नयाँ सिद्धान्तमा बताउँदैनन् बरु यो सिद्धान्त त स्कुलकै किताबमा पढाइन्छ र ब्याट्री सोही सिद्धान्तमा काम गर्छ। यसको लागि आवश्यक हुन्छ दुई धातुको पाता, पहिलो एनोड, जुन नेगेटिभ इलेक्ट्रो हो (उदाहरण: जिङ्क) र दोस्रो क्याथोड, जुन पोजेटिभ इलेक्ट्रोड हो (उदाहरण, कपर वा तामा) आलुको भित्र हुने एसिड जिङ्क र त
Jan92018 by PostKathmanduNo Comments
NTC को सिमकार्ड चलाउने लाई खुशीको खबर आज राती १२ बजे सबैलाई ५०० बोनस दिने यसरी एक्टिभ गर्नुस पहिले
काठमाडाैं, ६ पुस– नेपाल टेलिकमले जाडो मौसमका लागि विभिन्न प्रकारको ‘विन्टर अफर’ उपलब्ध गराएको जनाएको छ । उक्त अफर शुक्रबार देखि लागू भई माघ २१ गते सम्म कायम जनाइएको छ । कम्पनीले विभिन्न प्रकारका डाटा प्याक र बोनसको रुपमा डाटा स्ट्रिमिङ प्याक समेत उपलब्ध गराएको पनि जनाएको छ । डाटा स्ट्रिमिङ प्याक युट्युब र वाउटाइम एप्समार्फत टिभी हेर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ । १.विन्टर अल टाइम डाटा प्याक जिएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सिडिएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा विन्टर अल टाइम डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । विन्टर अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा तीन दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी २५ एमबी डाटा र एक दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी २५ एमबी डाटा स्ट्रिमिङ प्याक बोनसको रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी ६० रुपैयाँमा १४ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १५० एमबी
Jan62018 by PostKathmanduNo Comments
मेमोरी कार्ड’ बाट डिलिट भएका डाटा रिकभर गर्ने तरिका
आज हरेकले स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्ने गर्छन । लगभग सबै डाटा स्मार्ट फोनमा सुरक्षित गर्ने गरिन्छ । फोनको इन्टरनल मेमोरी कम हुँदा प्रयोगकर्ताले मेमोरी कार्डको प्रयोग गर्दछन । मेमोरी कार्डमा एप्स, म्युजिक, भिडियो, फोटो समेत अन्य डाटा स्टोर गर्ने सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईको मेमोरी कार्ड खराब भएमा के गर्नुहुन्छ? यस अवस्थामा तपाईको व्यक्तिगत र आवश्यक डाटा नोक्सान हुन सक्छ । यस्ता समस्याको समाधानको लागि एक सजिलो उपाय अपनाउन सकिन्छ । जसले मेमोरी कार्डबाट डिलिट भएका डाटा पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ । कार्डलाई दोस्रो डिभाइसमा चेक गर्नुहोस्:- सबैभन्दा पहिले मेमोरी कार्डलाई कुनै दोस्रो डिभाइसमा चेक गर्नुहोस् । धेरै पटक भाइरसको कारण डाटा डिभाइसमा शो गर्दैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो एसडी कार्डलाई निकालेर दोस्रो डिभाइसमा लगाएर चेक गर्नुहोस् । कार्ड रिडरमा मेमोरी कार्ड हेर्नुहोस्:- मेमोरी कार्डलाई
Nov182017 by PostKathmanduNo Comments
एनालग टिभी चलाईरहेकाहरुलाई आयो यास्तो खुशीको खबर !
मङ्सिर २, काठमाडौं । एनालग प्रविधिमा प्रसारण हुने टेलिभिजन थप एक महिना बन्द नहुने भएको छ । डिजिटल टेलिभिजन प्रसारण सुरु गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिएपछि सरकारले बिहीबारदेखि एनालग प्रविधिको टेलिभिजन प्रसारण बन्द गराएको थियो । बिहीबारदेखि नै महानगर बासिन्दाको टेलिभिजन प्रसारण एक्कासि बन्द भएपछि उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनालग प्रविधिको प्रसारण थप एक महिना बन्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो खबर कृष्ण रिजालले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् । मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणलाई थप एक महिना पर सारेको जनाएको छ । अर्थात् अझै एक महिना एनालग प्रविधिमा प्रसारित टेलिभिजन बन्द नहुने भएको हो । ‘देशमा निकट भविष्यमै हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा प्रस
Oct222017 by PostKathmanduNo Comments
नया कार जस्तै मोडलको मटर बाइक इन्डियामा लन्च हुने बितिकै धेरैले मन पराए भिडियो सहित 2,202,808 views यति धेरैले हेरी सकेको भिडियो सहित
नया कार जस्तै मोडलको मटर बाइक इन्डियामा लन्च हुने बितिकै धेरैले मन पराए भिडियो सहित 2,202,808 views यति धेरैले हेरी सकेको भिडियो सहित अन्य समाचार नयाँ श्रीमान चाहियो ! मलाई धोका दिने श्रीमानलाई देखाउनलाई भए पनि म अर्को विवाह गर्न चाहन्छु … म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनह